Efa noderain’i Homer indray maka, mihavery hazo ka mihasola ny tendrombohitra Ida ao Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2019 7:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, українська, Español, русский, 日本語, English
Koa satria mampitombo isa ireo fitrandrahana goavana i Torkia, dia niteraka fihetsiketseham-panoherana ny fandripahana ala notarihan'ny orinasa vahiny iray. Manatevin-daharana ireo mpikatroka ankehitriny ny Tiorka mpanakanto hanao fanairana, saingy moa ve hanakana ny governemanta tamin'ny fanomezana lisansa ny fanapahana hazo efa ho 200.000 isa?
Mailaka amin'ny fampivelarana ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, namolavola lalàna manasa ireo vahiny mpampiasa vola sy manome fepetra manokana ho azy ireny mba hamelarana ny lazainy fa laharam-pahamehan'ny tetipanorona ara-toekarena i Torkia. Tamin'ny taona 2000, ny Fitantanan-Tale Ankapobeny misahana ny Fikarohana sy Fitrandrahana Akora ankibon'ny tany (MTA) sy ny Minisiteran'ny Angovo nanomboka nametraka an-tsarintany ireo tahirin'akora mineraly. Tamin'ny taona 2004, nanitsy ny lalàna momba ny akora ankibon'ny tany ihany koa ny governemanta amin'ny fanomezana lisansa fikarohana-fitrandrahana amin'ireo orinasa, mampihena ny hetra ary manome alalana hiasana any amin'ireo faritra voaaro teo aloha. Farany, tamin'ny taona 2010, nanomboka namadika ireo lisansa fikarohana-fitrandrahana ho lisansa fiasana ry zareo.
Iray amin'ireo orinasa vahiny hita ao amin'ny tsena tiorka ny Alamos Gold, orinasa iray manana foibe ao Toronto izay efa nizaha ny tany hatramin'ny taona 2010. Araka ny tranokalan'ny orinasa, nahazo tetikasa maro io tamin'ny 6 Janoary 2010, avy amin'ny orinasa kanadiana iray hafa, Fronteer Development and Teck Resources tamin'ny bolongam-bola $90 tapitrisa. Nahazo ny fahazoan-dalana hiasa avy amin'ny Departemanta Tiorka misahana ny Angovo sy ny Loharanon-karena Voajanahary izy tamin'ny Marsa 2019.
Nnomboka niasa avy hatrany iz, na dia maro aza ireo fangatahana nataon'ny monisipaliten'i Canakkale hampitsaharana ny asa mba tsy hampididoza ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny olona ao an-toerana.
Fomba nentim-paharazana nahazatra ny orinasa mpitrandraka volamena ny heap leaching — fomba iray mampitsonika ny volamena ary manaisotra azy hiala amin'ny akorany amin'ny alalan'ny cyanide (cyanure). Matahotra ny mpikatroka ara-tontolo iainana, sy ny mponina ao an-toerana, fa mety hampiasa 20.000 taonina cyanide, fangaro shimika mahafaty izay mety hanimba ny biby sy ny zavamaniry manodidina raha misy ny fitobahana, ny orinasa. Raha miparitaka io fangaro shimika mahafaty io dia mety handoto ny tohodrano, izay manome rano ho an'ny olona mihoatra ny 180.000 ary hisandrahaka any amin'ny tany mihoatra ny 5.000 hekitara.
Tafaray ao amin'ny farangonteny #KazdağınaDokunma [Aza mikasikasika ny tendrombohitra Kaz] sy #KazDağlarıHepimizin [Antsika rehetra ny tendrombohitra Kaz] nanasaritaka ny sehatra media sosialy ireo mpikatroka, politisiana, solontenam-pikambanana tsy miankina hanehoany ny ahiahiny. Tamin'ny 26 jolay ihany koa ry zareo nanomboka nanomana hetsi-panoherana. Ary vokatr'izany, misy toby mijanona 24 ora ao amin'ny toera-panorenana mihazona “miambina ho an'ny rano sy ny konsiansy”, araka izay mety ho hita amin'ity lahatsoratra ity.
Raha milaza ny minisitetan'ny angovo sy ny harena voajanahary tao amin'ny fanambaràna iray fa tsy misy ny fampiasana cyanide, dia tsy izany kosa no ambaran'i Alamos:
Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny Reuters, nihilana tamin'ireo tsikera ny Filoha Tale Jeneralin'ny Alamos, John McCluskey, raha niteny fa hiverina amin'ny endriny taloha ny faritra rehefa tapitra ny enin-taona anatanterahana ny tetikasa. “Hafantoka amin'ny fambolen-kazo indray ny faritra ao anatin'ny enin-taona sy tapany. Ary mbola hihoatra noho izany indray aza ao anatin'ny folo taona, ho tahaka ny ala indray ny endriny,” hoy ny nolazainy. Nilaza ihany koa i McCluskey fa tsy ny orinasa no manapaka ny hazo fa ny manampahefana ao amin'ny governemanta. Fa izany ala nambolen'olombelona sy avela amin'ny natiora fotsiny izao izany dia mila 100 taona vao matoy, araka ny fanazavan'ny manampahaizana manokana.
Nitatitra ny Bianet, seha-baovao antserasera mahaleotena iray, tamin'ny volana aogositra, fa tsy araka ny nolazain'ny Filoha Tale Jeneraly McCluskey, nanapaka hazo tamin'ny alalan'ny mpiantoka asa antsoina hoe Dogu Minga Mining mihitsy ny Alamos. Ny zavamisy, nilaza ny tranonkalam-baovao fa efa hatramin'ny taona 2017 ny orinasa no nanapa-kazo. Eo amin'izay tranga izay, tsy ny hoe iza intsony no iadian-kevitra, fa hoe ahoana ny isorohana izany tsy hitranga intsony, satria 4050 metatra toradroa no narenina ary potika ny akanim-biby voajanahary.
Hatramin'izao manentsin-tadìny (manampin-tsofina) ny manampahefana manoloana ny fitakiana. Tsy neken'ny antoko mitondra AKP (Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana) sy ny antoko MHP (Antokon'ny Hetsika Nasionalista) mpiara-dia aminy ny fanapahan-kevitry ny depiote 26 avy amin'ny CHP Antokom-bahoaka Repoblikana ao amin'ny fanoherana hanao famotorana ny fananganana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany.
Namoaka lahatsary nampiarahana amin'ny farangon-teny ironana anankiroa #altindaolumvar (misy fahafatesana ao amin'ny volamena) sy #KazDaglariHepimizin (antsika rehetra ny tendrombohitra Kaz) ny iray amin'ny fikambanana ao amin'ny firenena anisan'ny mpitarika amin'ny fiarovana ny voary, TEMA (Orina Mpanasoa Tiorka Miady amin'ny Fikaohan'ny tany sy ho amin'ny famerenana ny ala ary ho amin'ny fiarovana ny voary):
Nanao fanangonan-tsonia ihany koa ny TEMA hampitsaharana ny asam-pitrandrahana. Tamin'ny fotoana nanoratana ity paositra ity, nahangona sonia mihoatra ny 500.000 ny fanentanana.
Maro ihany koa ny artista sy mpanoratra tiorka nanatevin-daharana ny mpanao fihetsiketsehana. “Ompa atao amin'ny vakoky ny tontolontsika” no anoritsoritan'i Zülfü Livaneli, mpanoratra sady mpamoron-kira tiorka, ny krizy ao anatin'ny taratasy misokatra ho an'ny UNESCO. Ambasadaoron'ny fahatsaram-po UNESCO teo aloha, nangataka tamin'ny andry i Livaneli hanampy amin'ny “fananganana fanairam-bahoaka iraisampirenena sy eo amin'ny mponina ao Ida amin'ity fanafihana mampihoron-koditra mahazo ny tendrombohitra manantantara Ida ity”.
Nisy kalaza ara-kolontsaina iray hafa koa, ny pianista Fazil Zay, nanome kaonseritra tamin'ny faran'ny volana aogositra teo amin'ny toeram-pihetseham-panoherana:
Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny Bianet, nilaza ny Ben'ny tanàna Canakkale Ulgul Gokhan fa betsaka ny fifanarahana fitrandrahana ao amin'ny faritra vao nosoniavina. Fa raha vao afaka miasa ry zareo, hoy izy, dia ho betsaka kokoa ny fahapotehana.
Ny tangorontendrombohitra Kaz no havokavoky ny faritra sy ny firenenay. Misy voary mahavalalanina ao amin'io faritra io. Aza mangina rehefa simbaina ny alanareo. #Kazdağınadokunma antsika rehetra ity tanindrazana ity.
Na dia milaza aza ireo manampahefana eo an-toerana tany aloha tany fa mikajy sy mitandrina amin'ny resaka tontolo iainana ry zareo, dia kely ny porofo fa azo antoka ny teniny. Ao Torkia, matetika mankany amin'ny tombontsoan'ny governemanta ihany izany fampiharan-dalàna izany. Na mety hisy olona samy hafa aza mitaky hilaza ho tompon'i Kaz Dağlari, dia ny natiora ao aminy aloha no tompony voalohany, ary masina izany, araka ny efa nolazain'i Homer indray maka.